Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 25 Anchor Tattoos ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-borona
Tetik'asa tsara indrindra amin'ny 25 Tatoazy ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Jolay 8, 2016
Totozy Ankerina midika hoe zavatra iray tsotra; fahamarinan-toerana. Ny toetry ny toe-javatra dia azo aseho amin'ny toe-javatra samihafa. Misy lafiny maro eo amin'ny fiainana izay mety ho miorina tsara ary ny fomba iray mampiseho azy amim-pireharehana dia amin'ny alalan'ny tatoazy. Ny fampiasana ny tatoahary #anchor dia ampiasain'ny olona maro hilaza tantara tsy fantatra momba ny zavatra niainany nandritra ny dingana sasantsasany teo amin'ny fiainany.
Ny tato ho an'ny anarka dia maneho ny hery sy ny fahamarinan-toerana. Efa nahita tato an-doko ve ianao? Ity #tattoo ity dia natomboky ny Sumerianina efa taona maro lasa izay. Ny tatoazy dia lasa iray amin'ireo tatoazy tranainy indrindra eran-tany ary nampiasain'ny Kristianina voalohany. Tamin'izany izy ireo dia nenjehina noho ny finoany. Anisan'izany ny sampan-draharaha misahana ny seranan-tsambo any amin'ny seranan-tsambo toy ny tafika, hery, fiarovana sy fiarovana,
1. Tapa-tavoahangy fananganana tato-tsavoka ho an'ny zazavavy
Tamin'ity andro ity, nanjary lamaody ny tatoazy fa mahita olona marobe tonga mankamin'ny tatoazy toy izao isika. Misy karazana loko roa karazana; ny faharetana sy ny teti-bola maharitra. Ny safidy dia ny manapa-kevitra anao.
2. Ankinin'ny tato an-tànana tato ho an'ny vehivavy
Ny tatoazy maharitra dia mety mihena tsikelikely amin'ny fahanterana, saingy mety tsy hiala amin'ny vatany izy afa-tsy amin'ny fanovana hafa.
3. Ireo hevitra farany momba ny tattoo-tattoo amin'ny hafatra, Aza avela ho faty ianao
Azo ampiasaina ny fitsaboana laser fa ny fanaintainana misy ifandraisany amin'ny dingana dia manala baraka.
4. Tetikasa mahatalanjona an-tànana tato ho an'ny famoronana ho an'ny zazavavy
Izany no antony mahatonga ny olona hatahotra ny handeha ho an'ity karazana tatoazy ity. Ny lafo kokoa amin'ny fanaovana izany dia lafo ihany koa izay tsy fahampiana.
5. Miverina amin'ny tato an-tànan'ny tato-tànana ho an'ny tattoo ho an'ny ankizilahy
Azo alaina mora foana ny fanaovana tatoazy. Ny pigment dia mipetaka eo amin'ny saron'ny hoditra ivelany izay mamela fotsiny ny epidermis miloko. Tokony ho fantatrao fa mety ho very ny selan'ny hodiny ianao raha esorina.
6. Voninkazo kely sy endriky tato-toto eo amin'ny fefy
Aza manahy momba ireo sela hoditra very, satria mety hiverina ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo. Raha mieritreritra ny hahazo an'io tatoazy io ianao nefa tsy azonao antoka raha toa ka mety ho tianao ny ho ela, dia mandehana amin'ny famolavolana vonjimaika.
7. vatofantsika hasehonao tombokavatsa famolavolana hevitra ho an'ny ankizilahy
Ny voka-dratsin'ny tatoavina tsy maharitra dia tsy mitovy amin'ny tatoazy maharitra izay mitaky fotoana hanasitranana aorian'ny fanovana.
8. Tattoo Anchor hevitra manakaiky ny elbow
Tsy tokony ho maimaika haka tatoazy ianao raha toa ka manapa-kevitra momba ny famolavolana. Ity tatoazy ity dia nataonà mpanakanto mahay iray izay nanao asa mahagaga niaraka tamin'ny #idea an'ny mpampiasa.
9. sandrin'ny tato ho an'ny fananganana tato fanentanana ho an'ny ankizilahy
Tsy hahatsapa fanaintainana ianao raha fanoloana vonjimaika. Na dia izany aza, ho an'ireo izay maniry ny hahazo tatoazy izay haharitra mandrakizay, tokony ho vonona hiaritra fanaintainana ianao mandritra ny fanesorana azy.
10. Voninkazo volo madinika sy tenda-tato ho an'ny tato ho an'ny tànana
Adinoy ny fahaverezan'ny ra raha tonga amin'ny #design tempo fa tsy toy ny tatoazy maharitra.
11. mpivady tato ho ato
Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana no nahatonga an'ity tatoazy mahafinaritra ity?
12. Toerana halatra tanana tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy
Ny fotoana izay niditra tao, ny fiheverana sy ny fandaniana dia zavatra sasantsasany izay azonao raisina rehefa handeha ho tatoazy ianao. Manana fahafinaretana be ianao rehefa manana tatoazy mahagaga tahaka izao. Eritrereto izany.
13. Ankona kely sy mahafatifaty tattoo fanombohana hevitra ho an'ireo ankizivavy madinika
14. Tato an-drakotra nentim-paharazana
Azonao atao ny mahita tato ho an'ny vatofantsika izay misy ribon-koditra miresaka azy amin'ny teny hoe 'Fianakaviana' voasoratra ao. Indraindray, mety hahita ray na reny ianao. Ireo teny ireo dia naneho ny resaka momba ny tanjaka sy ny fatorana ho azy ireo. Mety mety amin'ny fifandraisana iray izay efa nahatsikaritra ny vatolampy hatrany hatrany ianao fa mbola tonga manodidina mba hanaovana izany. Ny zavatra tokony ho azonao dia tato ho an'ny vatofantsika. loharanon-tsary
15. Voninkazo kely sy endriky ny tattoo manintona sary
16. Ny tetikasa fanokafana ny tora-patin'ny Wrist ho an'ireo zazavavy
Ny zavatra voalohany tokony hataonao alohan'ny handraisanao ny tattoo-nify dia ny fikarohana kely amin'ny karazana vatofantsika izay hifanaraka aminao. Maro ireo toerana ahafahan'ireo tatoazy ireo miala sasatra amin'ny vatan'ny olombelona. Ny haben'ny tatoazy dia miankina amin'ny toerana tianao hapetraka. Na ny sisin'ny rantsan-tànana aza dia mety ho toerana lavorary hahafahanao mandao ny tato-tinao. loharanon-tsary
17. Dream catcher ary manome hevitra tato ho an'ny zazavavy eo amin'ny tanana
Ny vatofantsika dia azo lazaina ho toy ny hery izay afaka mitazona sambo iray izay tian'ireo tantsaha tsy hanosika azy. loharanon-tsary
18. Tato ho an'ny endriky ny loko fanolo ny loko fanoratana ho an'ny vehivavy
Ankehitriny, olona manana tatoazy misy vatofantsika izay milaza amin'izy ireo fa afaka mijoro izy ireo rehefa toa mihintsana ny zava-drehetra. loharanon-tsary
19. Small mpivady tato ho ato
Ny fampiasana tato ho an'ny vatofantsika dia mety ho toy izany koa ny fifamatorana izay hifanelanelana ny fifandraisana lavitra; fampahatsiahivana ny zavatra tsara rehetra izay hitranga sy fifandraisana akaiky eo anivon'ny fianakaviana. loharanon-tsary
20. Toe-javatra momba ny tato ho an'ny vatan'ny tattoo ho an'ireo zazavavy
Raha tato ho ato ny tatoazy, ny fampiasana tato anatin-drakitra dia afaka mandalo lavitra be amin'ny fanomezana anao izany fanambarana izay tena ilainao izany. loharanon-tsary
21. Bird ary ny endriky ny tattoo fanoratana sary hosodoko ho an'ireo ankizivavy an-tongotra
Ahoana no tianao hanoratana ny tatoazy? Misy toerana toy ny kitrokely, ny tendany sy ny feny izay azonao ampiasaina amin'ny tatoazy. loharanon-tsary
22. Heart ary manamboatra hevitra tato ho an'ny tattoo amin'ny sandry
Afaka mamolavola ny tatoazy miaraka amin'ny voninkazo, teny, endrika ary endrika maro hafa ianao. Samy mahafinaritra ny tsirairay avy amin'ny endrika vita amin'ny vatofantsika tatoazy. loharanon-tsary
23. Ireo vorona vorona mitazona ny tato ho an'ny tato ho an'ny vehivavy ho an'ny vehivavy
Ny tatoazy dia lasa iray amin'ireo lamaody ankafizin'ny ankamaroan'ny olona amin'izao andro izao. Tsy afaka ny hamoy ny toetranao miaraka amin'ny tato-tsavoka misy vatanao ianao ao amin'ny vatanao. loharanon-tsary
24. Tapa-kevitra amin'ny tato an-tsoratra amin'ny hafatra, Aza milentika
Jereo ny karazany samihafa ary misafidiana ny tsara indrindra ho anao. loharanon-tsary
25. Bilaogy malemy hoditra tato ho an'ny famoronana ho an'ny vehivavy
tanana tatoazycompass tattooHeart Tattoostattoos ho an'ny lehilahykoi fish tattootattoos armtattoos footmehndi designmasoandro tatoazyrip tattoostattoos mahafatifatytattoos crossarrow tattootattoos mpivadytratra tatoazyscorpion tattooloto voninkazotatoazy fokotattoosraozy tatoazytattoo cherry blossommozika tatoazyNy zodiaka dia mampiseho tatoazytato ho an'ny vatofantsikaTattoo Feathertattooslion tattoosTatoazy ara-jeometrikatattoos backtattoo infinitytatoazy voninkazotattoo watercoloreagle tattoostattoos voronatatoazy lolofitiavana tatoazymoon tattoosAnkle Tattoosnamana tattoos tsara indrindratattoos rahavavytatoazy ho an'ny zazavavytattoo ideasanjely tattoostattoo eyetattoo octopusdiamondra tattoohenna tattooelefanta tatoazytattoos sleevecat tattoos